रुपन्देहीमा सुद्धृढ बन्दै स्वास्थ्य सेवा -::DainikPatra
रुपन्देहीमा सुद्धृढ बन्दै स्वास्थ्य सेवा
बुधबार, फाल्गुन ११, २०७३
बुटवल । सुगम जिल्लाको सूचिमा रहेको रुपन्देहीबासी केही वर्ष अघिसम्म उपचारका लागि बाहिरी जिल्ला धाउनुपथ्र्याे । यहाँ भएका थोरै अस्पतालहरुले ‘रिफर’को मात्रै काम गर्थे । एम्बुलेन्सको चर्काे भाडा तिरेर विरामीहरु चितवन त के काठमाण्डौं पुग्थे । कतिपय सोझै भारत तिर हानिन्थे ।
पहाडी जिल्लाबाट रिफर हुनेहरु बुटवल आउथे । अनि यहाबाट रिफर भएर अन्यत्र जानुपथ्र्याे । पछिल्लो आधा दशकमा जिल्लाको स्वास्थ्य सेवा सुदृढ हुदै गयो । यहाका अस्पतालमा प्रविधिसंगै विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा मिल्न थाल्यो ।
अहिले रुपन्देही स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रुपमा विकास हुदै गएको छ । बुटवलबाट रिफर हुने बिरामीले भैरहवामा उपचार पाउछन् । यसले एम्बुलेन्समै जीवन गुमाउनुपर्ने बाध्यता टरेको छ ।
रुपन्देहीका स्वास्थ्य संस्थाहरु राजधानीका अस्पतालसंग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम भएका छन् । भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल, आम्दा अस्पताल तीब्र स्तरबृद्धि गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदानमा लागेका छन् ।
जिल्लाकै दक्षिणी क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था र सेवामा त त्यति सुधार हुन सकेको छैन् । उत्तर तर्फको स्तरोन्नतीले आधा पश्चिम नेपालको बिरामीलाई धानेको छ ।
रुपन्देही त्यस्तो जिल्ला बनेको छ, जहा नेपाल बाहिरका मानिसहरु पनि उपचारका लागि आउछन् । रणअम्मिका आखा अस्पतालले भारत उत्तर भारतका धेरै बिरामीको सेवा गरिरहेको छ ।
वि.सं. १९९० सालमा स्थापना भएको जिल्ला अस्पतालबाट बिरामीहरुलाई उपचार गर्न सुरुवात गरेको यो जिल्लामा हाल बिभिन्न किसिमका रोगहरुको उपचार एवम निदान हुने गरेको छ । जिल्लामा रहेको अर्को सरकारी अस्पताल लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बि.सं. १९९९ सालमा स्थापना भयो । २०५० साल भन्दा पहिला दैनिक रुपमा बिरामीहरु गोरखपुर एवम काठमाण्डौ लगायतका स्थानमा जाने गरेका थिए । सामान्य फिजिसियन, बच्चा र महिलाको प्रशुति सम्बन्धी रोगहरु बाहेकका अन्य रोगहरुको उपचारको लागी एक सयभन्दा धेरै बिरामीहरु जिल्ला बाहिर निस्किन्थे ।
जिल्लामा प्रबिधि नहुँदा डाक्टरहरु सेवामा आएनन । त्यसकारण बिरामीहरु बाहिर जाने गरेका थिए । जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०५१ सालदेखि परिवर्तन सुरु भएको हो । जिल्लामा रहेका २ सरकारी अस्पताल मात्र रहेको हुँदा दैनिक रुपमा उपचार गर्ने बिरामीहरुको संख्या कम रहेको थियो । जिल्लामा निजि अस्पतालहरुको स्थापना २०५० सालबाट सुरु भयो ।
२०५० सालसम्म दैनिक रुपमा ३ सय ५० बिरामीहरु आउने गरेको अञ्चल अस्पतालमा २०५५ सालबाट ७ सय बढि बिरामीहरु आउन थाले । २०५४–०५९ सालसम्म अस्पतालका अध्यक्ष जनक कोईरालाका अनुसार अस्पतालमा सेवा सुविधा थपिएपछि सेवाग्राहीको संख्या बढ्यो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय रुपन्देहीका सुचना अधिकृत ओमप्रकाश गुप्ताका अनुसार हाल रुपन्देहीमा दुई अस्पताल सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ५ वटा र स्वास्थ्य चौकि ६४ वटा छन् । त्यस्तै ११ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायीक स्वास्थ्य टोलि २ वटा छन् । पि एच सि–ओ आर सि २ सय २९ वटा, खोप केन्द्र २ सय ७४ वटा छन् । एफसि एच भि (ग्रामीण) १ हजार २ सय ७० वटा छन भने एफ सि एच भि (शहरी) २ सय ४१ वटा छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु ४४ वटा र निजि स्वास्थ्य सुबिधा ३३ वटा रहेका छन् ।
जिल्लाका अस्पतालमा अहिले दैनिक ३ हजार बढि विरामीले ओपिडी सेवा लिईरहेका छन् । वार्षिक रुपमा ओपिडि मार्फत ८ लाख ५० हजार देखि ९ लाख जना बिरामीहरुले ओपिडि सेवा लिने गरेको जनस्वास्थ्यको तथ्याङक छ । जिल्लामा हाल ४४ वटा एम्बुलेन्सहरु रहेका छन ।
जिल्लामा एच आई भि संक्रमित संख्या १ सय ४५ जना छन् । त्यस्तै क्षयरोगको पनि बिरामीहरु पनि निको भईरहेको अवस्था छ । आ.ब. ०७२÷७३ मा ९२ जना क्षयरोगका बिरामी निको भएका छन् ।
रुपन्देहीमा सामान्यतया परिवार नियोजन, ओपिडि, क्षयरोग, कुष्ठरोग एच आई भि लगायतका रोगको उपचार तथा रोग नियन्त्रणको बारेमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु भईरहेका छन । यद्यपि रुढिबादी परम्परा मान्ने समाज अझै बाकी छन् ।
अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा
क्षेत्रीय अस्पतालमा स्तरोन्नती हुदै गरेको लुम्बिनी अस्पतालमा दैनिक १५ सय भन्दा बिरामीहरुले सेवा सुबिधा पाईरहेका छन् । अस्पतालमा पश्चिम नेपालका धेरै विरामीहरु आउने गर्छन । अस्पतालमा ११ विशेषज्ञ डाक्टरहरु रहेका छन् । जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, वाल रोग, हाड – जोर्नि, छाला रोग , नाक ÷ कान ÷ घाँटी, स्त्री ÷ महिला ÷ प्रसुति , मुटु रोग, मानसीक रोग र दाँत सम्बन्धी विशेषज्ञ द्वारा नियमित रुपमा उपचार भईरहेको अस्पतालका सुचना अधिकारी लक्ष्मिराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
अस्पतालमा टिकट लिनेको भिड व्यवस्थापन गर्न तथा अस्पतालमा धेरै बिरामीहरुलाई सेवा दिन टोकन प्रणलि सुरु गरिएको छ । हाल अस्पतालले बिना चिरफार अप्रेसन सेवा (दुरबिन अपरेसन)सुरु गरेको छ । यसबाट पित्त थैलिको, एपेन्डीसको प्वाल पारेर अपरेसन गर्न सकिने छ । अस्पतालले यो आर्थिक बर्ष भित्रमै नयाँ ओपिडि सुरु गर्ने रेग्मीले जानकारी दिए ।
नयाँ ओपिडिमा मानसिक रोगीका लागी लाभदाएक हुनेछ । त्यस्तै मुटु रोगकिो लागी मुटु रोग बिभाग समेत निर्माण भईसकेको छ । जिर्ण बन्दै गएका अस्पतालका नया भवन निर्माणका कार्यहरु सुरु भएको छ । सरकारको बहुवर्षिय योजनामा प्रसुति गृह निर्माण हुने समेत अस्पतालका सुचना अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए । यसलाई केही समयमै ३ सय बेडको बनाइदैछ ।
आँखाको उपचार ः रण अम्बिका
आँखा उपचारमा देशकै ठूलो अस्पताल हो भैरहवामा रहेको रण अम्बीका आँखा अस्पताल । देशभर तथा बिदेशबाट आँखाको उपचारको लागी आँखा रोगीहरु दिनहु आउने गरेका छन् । अस्पतालमा दैनिक रुपमा देश तथा बिदेशबाट गरी ७ सय भन्दा बढि आँखाका बिरामीहरु आउने गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सागर प्रताप राणाले जानकारी दिए ।
देशका ९० प्रतिशत आँखाका बिरामीलाई अस्पतालले उपचार गरीरहेको उनले जानकारी दिए । वि.सं. २०३८ सालमा स्थापना भएको नेत्रज्योति संघको मातहतमा निर्माण भएको हो र यसका देशभरमा १७ शाखा अस्पतालहरु रहेको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिए ।
अस्पतालमा आँखाका २० जना विशेषज्ञहरु रहेका र २ जना एन थेसिया रहेका छन् । अस्पतालबाट आँखाको रेटिनाको ब्लास्टोमाको हकमा क्रमो गर्नुपर्ने भएमा यो सुबिधा उपलब्ध नभएको उनले बताए ।
यस अस्पतालमा भारतबाट उपचारको लागी आउने धेरै छन् । भारत, साउथ अफ्रिका, पाकिस्थान लगायतका देशहरुबाट उपचारका लागी आँखाका बिरामीहरु आउने गरेको राणाको भनाई छ ।
बाल उपचारमा आम्दा
वालवालिकाको उपचारको केन्द्र बनिरहेको छ, सिद्वार्थ वाल तथा महिला अस्पताल । महिला तथा वालवालिकाको उपचार गर्ने आम्दा पश्चिम नेपालकै अस्पताल हो । यहा दैनिक २ सय भन्दा बढि बिरामीहरु उपचारमा आउने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक बिनोद पराजुलीले बताए ।
गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, कपिलबस्तु, रुकुम, रोल्पा, दाङ्ग, नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँबाट उपचारका बिरामी आउछन् । नवजात शिशुको शल्यक्रिया समेत हुनेगरेको उनले बताए ।
प्रशुति तथा महिला रोगको क्षेत्रमा नियमित उपचार हुने गरेको छ । डेलिभरी तथा पाठेगरको अप्रेशन हुने उनले जानकारी दिए ।
धेरै उपचार ः युसिएमएसमा
भैरहवामा रहेको मेडिकल कलेजमा धेरै रोगको परामर्श तथा उपचार सेवा छ । दैनिक रुपमा औषत ८ सय बिरामीले उपचार लिने अस्पतालमा सामान्य चिकित्सा, महिला ÷ स्त्री ÷ प्रसुति, नाक ÷ कान ÷ घाँटी , हाड जोर्नि, न्युरो, वाल रोग, आँखा, दाँत, मानसिक, छाला तथा यौन रोग, सामान्य शल्यक्रियासहितका अरु रोगको उपचार हुने गरेको अस्पतालका प्रशासन संयोजक तेज केसिले बताए । अस्पतालमा न्युरोको उपचार, मुटुमा रगत जमेमा पनि युसिएमएस मा उपचार हुने गरेको छ । मुटु लगायत पिसाबमा संवन्धी रोगको उपचार हुने गरेको छ ।
मुटुको मुटु ः गौतमबुद्व
बुटवल रामनगरमा रहेको गौतमबुद्व सामुदायिक मुटु अस्पतालमा ओपन सर्जरी बाहेकका सम्पुर्ण सुबिधाहरु रहेको गौतमबुद्व सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारि दिए । अस्पतालमा ३६५ दिन ओपिडि सेवा, दश रुपैयामा सुगर र रक्त परीक्षण हुने गरेको छ । निशुल्क मृर्गाला डाईलिसिस सहित दम तथा छाति रोगको उपचार समेत मुटु अस्पतालमा छ ।
राजधानी बाहिरको सुविधासम्पन्न मुटु अस्पतालमा औषत रुपमा दैनिक २ सय ५० र सुगर चेकका लागी दैनिक रुपमा ५० जनाले सेवा लिइरहेको अस्पतालका सचिव दिनेशराज रेग्मीले जानकारी दिए । काठमाण्डौको गंगालल मुटु अस्पताल पछिको दोस्रो ठुलो सामुदायिक मुटु अस्पताल हो । अस्पतालमा डाईलोसीस गर्ने १७ वटा मेसिनहरु समेत रहेका छन् । मुटु तथा मुटु संग संवन्धीत सम्पुर्ण रोग को उपचार यस अस्पतालमा हुने गरेको पनि सचिव रेग्मीले जानकारि दिए ।
भीम अस्पतालमा आमा सुरक्षा
जिल्लाको भिम अस्पतालमा अन्य सुबिधाको तुलनामा आमा शुरक्षा कार्यक्रमको सेबा बढि हुने गरेको छ ।
अस्पतालमा आउने बिरामीहरु मध्ये ८० प्रतिशत आमा सुरक्षा कार्यक्रमका बिरामीहरु रहको अस्पतालका सुचना अधिकारी सर्वजित बरईले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक रुपमा ५–७ जना भारतिय बिरामीहरु उपचारको लागि आउने गरेका छन् ।
अस्पतालमा महिनामा करिब ३ सय जना आमाहरु उपचारका लागि आउछन् । मासिक ३० वटा शल्यक्रिया हुने गरेको छ । २५ शैया क्षमताको अस्पतालमा दैनिक २ सय ५० बिरामीहरु आउने गरेका छन् ।
जिल्लामै डाक्टर उत्पादन
मेडिकल शिक्षा अध्ययन हुने युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजले सन् १९९९ देखि डाक्टर उत्पादन थाल्यो । कलेजबाट एमबिबिएस अध्ययन गरी हाल सम्म १ हजार २ सय २४ डाक्टर उत्पादन भएका छन् । त्यस्तै बिडिएस सन् २००१ बाट सुरु भई हाल सम्म ३ सय, २००९ बाट शुरु भएको एम डि ÷एम एस बाट ५९ जना डाक्टर उत्पादन भएका छन् । सन् २०१० बाट शुरु भएपछि हालसम्म १२ जना एमडिएस डाक्टर उत्पादन भएका छन् । सन् २०१० बाट शुरु भएको नर्सिङतर्फ ६७ उत्पादन भए र्। हालसम्म ४ जना बि फार्मेसियन र ६ जना बि.एस.सि.एमएलटि उत्पादन गरेको छ ।
अझै अभाव छ रगत
करिब ९ लाख जनसंख्या रहेको रुपन्देही जिल्लामा दैनिक रुपमा २५ पिन्ट(युनिट) रगत अभाब छ । दैनिक रुपमा करिब १० हजार जनाले रक्तदान गर्न मिल्ने भए पनि जम्मा ५० जनाले मात्र दैनिक रुपमा रक्तदान गर्दे आएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले जनताहरुलाई रक्तदान गर्ने चेतना फैलाउन नसक्दा दाताको संख्या कम रहेको नेपाल स्वयमसेवी रक्तदाता समाज रुपन्देही अध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले बताए ।
सोसाइटीसंग जनशक्ति कम भएकाले लक्ष्य अनुरुप काम हुने नसकेको बताइन्छ । रक्तदाता समाज रुपन्देही अध्यक्ष चौहानका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका जम्मा २ सय जनाले निरन्तर रक्तदान गरिरहेका छन् ।
क्यान्सरको छैन उपचार
रुपन्देहीमा अहिलेसम्म क्यान्सर रोगको उपचार उपलब्ध हुन सकेको छैन् । कतिपय घुमवा डाक्टरहरुले जिल्लामा आएर परामर्श सेवा दिए पनि अन्य उपचार दिन सकेका छैनन् । केही सामाजिक संस्थाहरुले क्यान्सर रोगको अस्पताल खोल्ने अभियान चलाएका थिए । त्यो सफल हुन सकेको छैन ।
ट्रमा सेन्टर बनाउनुपर्छ
पछिल्लो समय जिल्लामा ट्रमा सेन्टरको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यस क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरुलाई चौतर्फी रुपमा ट्रमा सेन्टर खोल्न दवाव आइरहे पनि ठोस काम हुन सकेको छैन् । राजधानीमा मात्रै सिमित रहेको ट्रमा सेन्टरमा बुटवलमा खोल्न सके पश्चिम नेपालका बिरामीलाई उपचार सेवा दिन सक्नेछ ।
दक्षिणी क्षेत्रमा छैन सेवा
शहरी क्षेत्रमा धेरै उपचार सेवा उपलब्ध भए पनि ग्रामिण क्षेत्र, विशेषगरी मर्चवार क्षेत्र सामान्य उपचारबाट समेत विमुख रहेको छ । यहा प्रसुतिका लागि समेत कठिन अवस्था छ । गाउमा रहेका उपचार केन्द्रमा रहेको दरवन्दीका चिकित्सकहरु काजमा शहरतिर बस्दा ग्रामिणबासीले उपचार सेवा पाउन नसकेका हुन् ।
रुपन्देहीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मारेको फड्को संगै औषधि उद्योगको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । आधा दर्जन औषधि उद्योगले जिल्लाबाट उत्पादन गरिरहेका छन् । आगामी तीन वर्षपछि जिल्ला स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बन्ने आकलन गरिएको छ ।
जिल्लामा उपलब्ध उपचार सेवाहरु
महिला ÷ स्त्री ÷ प्रसुति
नाक ÷ कान ÷ घाँटी
एच आई भि
एपेन्डीसको को शल्यक्रिया
दक्ष प्रशुति कर्मी निर्माण गर्न को लागी तालिम
अप्रेशन कार्यमा सहायक बन्नको लागी तालिम